Qaybo ka mid ah Kenya oo ay Biyo la’aan xooggan ka jirto | Puntland
Qaybo ka mid ah Kenya oo ay Biyo la’aan xooggan ka jirto
Shacabka ku dhaqan Gobolka ay Soomaalidu degto ee Waqooyi Bari Dalka Kenya ayaa ka cabanaya Biyo la’aan xooggan oo soo wajahday qaybo ka mid ah degaannaasi.
Guddoomiyaha Tuulada Ashabito, oo ka tirsan Mandheera Kenya , Jeelle Caliyow ayaa sheegay inay halkaasi ka jirto Biyo la’aan baahsan oo xitaa samaysay degaannada ku xeeran.
Guddoomiyaha ayaa intaa ku daray in aan muddo dheer la dayac tirin Baraagihii ay Biyaha ku kaydsan jireen, haraaga yar ee iminka ku jirana uu is beddelay midabkoodu Dadkuna uusan isticmaali karin, wuxuuna ka digay inay halkaasi ka dhashaan Cudurro uu ka mid yahay Shuban Biyoodka.
Dowladda dhexe ee Dalka Kenya ayuu ka codsaday in loo dayactiro Waraha, Baraagaha iyo goobaha kale ee ay Biyaha ku kaydsadaan, isla markaana lala soo gaaro Biyo nadiif ah iyo gargaar Tuulada uu guddoomiyaha u yahay ee Ashbito iyo degaannada ku xeeran.
Cabashadan iyo qayli dhaanta ka soo yeereysa Dadka ku dhaqan qaybo ka mid ah Gobolka Waqooyi Bari Dalka Kenya ee la xiriirta Abaarta iyo Biyo la’aanta ayaa kusoo aadaysa iyadoo ay Dalka Kenya intiisa badan ka da’ayaan Roobab Lixaad leh oo wata daadad iyo dabaylo.